France dia manambara ady amin'ny mpihazona fiara finday finday | Vaovao momba ny gadget
Iza eto no tsy manana mpihazona finday ao anaty fiara? Angamba izao izy ireo dia tsy dia mahazatra loatra amin'ny efijery mikasika izay misy amin'ny ankamaroan'ny modely amin'ny karazana rehetra sy ny marika rehetra. Na izany aza, isika izay misafidy ny hivezivezy amin'ny GPS an-tariby na manana ny fitantanana mozika anay, dia mbola misafidy ireo fanampiana ireo.
Raha ny tatitra farany natao dia manomana lalàna vaovao handràra ireo manana telefaona finday amin'ny dashboard ny Gauls. Farafaharatsiny mba hamerana ny fampiasana azy ireo mafy izy ireo, avelany amin'ny toe-javatra tena voafaritra ihany.
Ny afovoany Le Figaro Tsapany fa ny manampahefana dia efa miasa amin'ny lalàna vaovao izay ho voafintina. Azonao ampiasaina ireto fanohanana ireto raha mbola mijanona ny fiara ary mijanona ny motera, mandritra ny tranga sisa dia tsy maintsy mandoa onitra 135 euro ianao Raha toa ka manapa-kevitra ny hampiasa ny fitsarana ny tompon'andraikitra iray amin'ny fahefana ary hanasazy anao amin'izany. Ho fanampin'izay, io sazy io koa dia hitarika fahaverezan'ny isa vokatr'izany, satria i Frantsa dia mampiasa io karazana fahazoan-dàlana io toy ny any Espana ihany koa, ary voaporofo fa tena mandaitra.
Mazava fa ny tena tanjon'ny Governemanta frantsay dia ny fiarovana ny ain'ny mpamily. Nefa Ny tsy famelana ny fampiasana ny fanohanana dia hametraka ireo izay mila finday hivezivezy eo anelanelan'ny vato sy ny toerana sarotra satria tsy manana navigatera namboarina ao anaty fiara izy ireo. Ankoatr'izay, ny fahasamihafana misy eo amin'ny rafitra toa ny CarPlay sy ny fananana ny efijery finday mihantona amin'ny aerator dia kely dia kely. Angamba tsy sahy na tsy mamokatra loatra ity fepetra ity, dia ilaina ny mahita azy mandritra ny volana maro, indrindra raha misy fiantraikany izany na tsia amin'ireo iharan'ny lozam-pifamoivoizana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Nanao fanambarana ny ady amin'ireo tompona fiara finday avo lenta i Frantsa